जीरा पानीले २० दिनमै तपाईको तौल घटाउछ: जीरा पानी घरमै कसरी तयार गर्ने ? (शेयर गरौ) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/जीरा पानीले २० दिनमै तपाईको तौल घटाउछ: जीरा पानी घरमै कसरी तयार गर्ने ? (शेयर गरौ)
9,7095minutes read
जीरा तौल घटाउनको लागि चमत्कारिक तौल घटाउने पेय पदार्थको रुपमा लिइन्छ । विहान खाली पेटमा जीरा पानी पिउँदा मेटाबोलिज्ममा हुने सुस्तता, पाचन प्रक्रियामा भएको गडबडी, इन्सुलिनमा हुने प्रतिरोधको रक्षा जस्ता समस्याको समाधान हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यदि तपाई यस्ता समस्या, पेट बढ्ने जस्ता समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने २० दिनसम्म जीरा पानी नियमित खानुपर्छ ।जीरा पानी घरमा कसरी तयार गर्ने ? यसलाई दैनिक खानामा कसरी संलग्न गर्ने त ?
रातभरी भिजाएको जीराको दाना विहान राम्रोसँग भिजाइसकेपछि र राम्रासँग फुल्लिएपछि जीराको दानामा भएको पौष्टिक तत्व बाहिर निस्किन्छ र पानीमा घुल्छ । जसले गर्दा पानीको रंग पहेँलो रङमा बदलिन्छ । जीरा पानी बनाउनको लागि जीरा सीसाको गिलास, स्टेनलेस स्टील वा तामाको कचौराको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।,,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
अध्ययनका अनुसार , जीराको दाना एन्टिअक्सोडन्टस् हो जसले अक्सिजनमा हुने खतरनाक अनावश्यक रेडिकललाई कम गर्न मद्दत गर्छ । जीराका दाना भिटामिन ‘ए’ र ‘सी’को राम्रो स्रोत हो । र यी दुई भिटामिन एन्टीअक्सीडेन्ट पनि हुन् । जसमा मिनरल, तामा र म्याग्नेजजस्ता तत्वहरु पाइन्छन् जसले फ्रि रेडिकललको सफाई गर्ने काम गर्दछ ।
यदि तपाईंको शरीरमा मेटाबोलिज्मको मात्रा कम छ भने विना मोटोपननै शरीरमा मेटाबोलिज्मको मात्रा बढाउँन सकिन्छ । जीरा पानीमा भिटामिन र मिनरल पाइन्छ जसले विविध तरिकाले मेटाबोलिज्मले गर्ने काम गर्छ । साथै जीरा पानीले कोशिकालाई सक्रिय बनाउँन र फुल्लिन मद्दत गर्छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले पत्ता लगाएअनुसार जीरा पानीले मेटाबोलिज्मको मात्रा बढाउन, अत्याधिक मोटोपनमा हुने बीएमआइ घटाउन मद्दत गर्छ ।
जीरा पानीले पाचन प्रणाली र पेटमा भएको बावलको सञ्चालनको लागि निकै महत्वपुर्ण भूमिका खेल्छ । पाचन प्रक्रिया स्वस्थ हुनुनै मेटाबोलिज्मको मात्रा बढ्नु हो साथसाथै तौल घट्नु पनि हो । जीरा पानीले निरन्तर पाचन प्रक्रियामा एन्जामाइनलाई प्रभाव पार्ने र ब्लोटिङ घटाउने काम गर्छ ।,,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
एलडिल अर्थात खराब कोलेस्ट्रोलले तपाईको धमनीको प्वालमा प्लेक बनाएर कार्डियोभास्कुलरमा संक्रमण पैदा गराउन सक्छ । इरानका वैज्ञानिकहरुले मोटोपन भएका महिलामा जीराको प्रभावबारे गरेको अनुसन्धान गरे र शरीर संरचना, लिपिड प्रोफाइलको प्रभावको पनि अध्ययन गरे । तीनमहिनापछि लिपिड प्रोफाइलको विश्लेषण गर्दा एलडियल कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसराइड्स र उच्च एचडिएल कोलेस्ट्रोल कम पाइयो । जीरा पानीले कम्मरको साइज कम गर्न मद्दत गर्छ ।
निकोटिन फाल्न मद्दत गर्छ
अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण शरीरमा बढिरहेको निकोटिनले शरीर सुन्निने, तनाव बढाउने, कब्जियत गराउने र तौल पनि बढाउँछ । जीरा पानीले यस्त समस्याबाट बचाउन सक्छ ।
१. जीरा पानी र कागती
आवश्यक सामाग्रीः –एक चियाचम्चा जीरा –एक कप पानी –आधा चम्चा कागतीको रस
१. दुई चिया चम्चा जीरालाई एक कप पानीमा रातभरी भिजाउने । २. विहानीपख जीरा पानी छान्ने र पानीमा कागतीको रस घोल्ने । ३. राम्रोसँग घुलेपछि जीरा पानी पिउने ।
फाइदाः कागती भिटामिन ‘सी’ को मुख्य स्रोत हो । जसले तपाईको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउँछ । शरीरमा टक्सीनको मात्रालाई कम गर्छ र शरीरको आन्तरिक पीएचलाई सन्तुलनमा राख्छ ।
२. जीरा पानी र दालचिनी
आवश्यक सामाग्रीः – एक चियाचम्चा जीरा – एक कप पानी – एक चियाचम्चा दालचिनीको पाउडर
१. दुई चियाचम्चा जीरा एक कप पानीमा राखेर रातभरि भिजाउने २. विहान दालचिनीको पाउडर पानीमा राखेर ५ मिनेट उमाल्ने । ३. त्यसपछि पानीलाई सेलाउन दिने र जीरा पानीमा घोलेर पिउने ।
फाइदाः दालचिनीले तनाव कम गर्न र शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा कम गराएर शरीरको तौल सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ ।
३. जीरा पानी र एप्पल साइडर भिनेगर
आवश्यक सामाग्रीः –एक चिया चम्चा जीरा –एक कप पानी –एक चियाचम्चा एप्पल साइडर भिनेगर
१. दुई चिया चम्चा जीरालाई एक कप पानीमा रातभरि भिजाउने २. विहान भएपछि पानी छान्ने र एक चियाचम्चा एप्पल साइडर भिनेगर मिसाउने ३. राम्रोसँग घोलेर पिउने ।
फाइदाः एप्पल साइडर तौल घटाउन फाइदाजनक मानिन्छ । यसले रगतमा सुगरको मात्रा घटाउँन, पाचन पक्रिया सन्तुलनमा राख्न र बोसोको मात्रा बढ्नबाट रोक्छ ।
तौल घटाउनको लागि कुन समयमा पिउने जीरा पानी ?
–पहिलो कपः खाली पेटमा –दोस्रो कपः खाना खानुभन्दा २० मिनेट अगाडि –तेस्रो कपः रातिको खाना खाएको २० मिनेट पछि
तौल घटाउनको लागि दिनमा तीनपटक जीरा पानी पिउनैपर्छ । तर जीरा पानीले मात्र शरीरको तौल घटाउन सम्भव हुँदैन त्यसैले दैनिक खानपानमा पनि ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
जीरा र दही
जीरा र दहीको स्वाद निकै स्वादिष्ट हुन्छ । यसलाई तपाईं सलादको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
आवश्यक सामाग्रीः –एक कप दही –दुई चियाचम्चा जीराको धुलो –एक चियाचम्चा कागतीको रस –एक चिम्टी नुन,,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
कसरी तयार पार्ने ?
१. दही, जीराको धुलो, कागतीको रस र नुन एउटै भाडोँमा राखेर घोल्ने र खानामा प्रयोग गर्ने ।
टिप्सः यसमा तपाई काक्रोको टुक्रा, टमाटर, प्याँज जस्ता सलादहरु पनि मिसाएर स्वाद बढाउँन सक्नुहुन्छ ।
अन्य तरिकाहरुः – जीरा पानी मदिराको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिन्छ – जीरको धुलो सलाद, पोलेको कुखुराको मासु, माछा, पनिर लगायत तरकारीहरुमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । – मुसुरोको दालमा जीराको दाना फुराएर स्वादिष्ट बनाउन सकिन्छ ।
टिप्सः जीराको दाना कहिल्यै पनि डढाउन हुँदैन ।
अन्य फाइदाः – नियमित जीरा सेवनले पाचन प्रक्रियामा भएको समस्याको समाधान गर्छ । – मुटुसम्बन्धि खतरा कम गर्छ । – मधुमेह नियन्त्रण गर्छ – निद्रा लाग्न सहयोगी
– जीरामा आइरनको मात्रा बढी हुने भएकाले यसको सेवनले एनेमिया रोग लाग्नबाट बचाउँछ । – दिमाग तेज गराउँछ – एन्टीओक्सीडन्ट्स भएकाले क्यान्सरसँग लड्न मद्दत गर्छ । – छालाको लागि फाइदाजनक
जीरा पानी र जीराका फाइदा सँगसँगै यसका केही वेफाइदा पनि छन् । यसको प्रयोगले कतिपय अवस्थामा फाइदा भन्दा घाटा गर्छ ।
जीरा पानीको वेफाइदाः – मुटु पोल्ने समस्या – कलेजो खराव हुने – रक्तचाप कम हुने – महिनावारीको समयमा रगत धेरै बग्ने – पखाला लाग्ने
जीरा पानी तौल घटाउनको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यो बनाउन र प्रयोग गर्न पनि सहज हुने भएकाले दैनिक यसलाई खान सकिन्छ ।
हामी सबै मोबाईल प्रयोग गछौ । मोबाईल फोन प्रयोग गर्ने बानी सबैमा छ । मोबाईल अहिलेको अत्यावश्यक प्रयोग सामाग्री भईसकेको छ । अन्य समयमा मोबाईलको प्रयोग र राती सुत्नुभन्दा अघिको मोबाईल प्रयोगमा भने ध्यान दिनुपर्छ । दिनमा त ठिकै छ तर राती सुत्नु भन्दा पहिले कम्तीमा पनि एक घण्टा अघि मोबाईलाई आफूबाट टाढा राख्नुपर्छ । यदि यसो गरेनौ भने हामीमा केहि समस्याहरु निम्तीन सक्छन् ।,,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
लसुनलाई आफ्नो पकेटमा राख्नुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ यस्तो चमत्कार